व्यावसायिक फूल खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दो – Sulsule
सुलसुले २०७८ कात्तिक १० गते १५:५० मा प्रकाशित
देउखुरी । घर आँगनमा सयपत्री र मखमली फुल्दा तिहारको झल्को आउने गर्छ । यस्तै झल्को दिएको छ, दाङमा ढकमक्क फूलेका फूलले । रोल्पा सुन छहरी गाउँपालिका–७ मा जन्मिएका लोकेन्द्र रोकामगर एक दशकअघि रोजगारीको सिलसिलामा कतार पुगेका थिए । स्वदेश फर्किएपछि उनलाई केही नयाँ व्यवसाय गर्ने सोँँच पलायो र दाङ आएर व्यावसायिक फूल खेतीमा लागेको उनले राससलाई बताए ।
विदेशमा श्रमको मूल्य बुझेपछि स्वदेशमै श्रम खर्च गर्न सके यहीँ सुन फलाउन सक्ने अठोट बनाए । त्यही बेला उनको मनमा फूलखेती गर्ने अनौठो योजना बन्यो । सुरुमा उनलाई फूलखेती कस्तो होला भन्ने लागेको थियो तर बजारको माग र अवस्था बुझेर काम सुरु गरेपछि सात वर्षअघि घोराहीमा– ६ कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर परीक्षणका लागि १ कट्ठाबाट फूलखेती सुरु गरेको रोकामगरको व्यवसाय फक्रिँदै गएको छ ।
सुरुवाती चरणमा बजारमा फूल बिक्रीका लागि लैजाँदा फूल पनि बेच्छन् ? भन्ने मानिस अहिले ग्राहक बनेको उनको भनाइ छ । फूल टिप्नु हुँदैन, पाप लाग्छ भन्ने समाजमा रहेको गलत मान्यतालाई चिर्दै फूलको व्यावसायिक खेती थालेको उनी अहिले सफल फूल व्यवसायी बनेको छ । घोराही– १४ झिङगौरामा रोकामगरले करिब एक बिघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक फूलखेती गर्दै आएका छन् । लगातारको परिश्रम, काममा विश्वास र श्रमको सम्मान गर्दै जाँदा अहिले फूल व्यवसायी बनेर परिचित हुन पाउँदा आफूलाई मनमा निकै सन्तोष मिल्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
पहेँलपुर फुलेका सयपत्री फूलको बगैँचामा काम गर्दै रोकामगरले भने, “सुरुसुरुमा फूल संस्कृतिको विकास गर्न चुनौती सामना गर्नुप-यो, विस्तारै सबैले यसको महत्व बुझ्दै गएपछि, अहिले राम्रो भएको छ, यसले पनि मलाई काम गर्नमा थप हौसला मिलेको छ ।” उनले सुरुआती चरणमा फूलको नर्सरी र मौसमी फूलखेती गर्दै आएका थिए ।
जिल्लामा दसैँ, तिहारलगायतका पर्व एवं अन्य शुभकार्यका लागि फूलको माग देखेपछि फूलखेती थालेको उनले बताए । “मैले सुरु गर्ने बेलामा दाङमा व्यावसायिक रुपमा फूलखेती कतै भएको थिएन, काठमाडौँतिर फूलखेती व्यावसायिक रुपमा गरेको देखेको थिएँ अनि मैले यहाँ गर्दा कसो नहोला र भन्ने सोँच बनाएँ”, रोकामगरले भने ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि केही अनुदान सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । “जलजला पुष्पखेती”को नामबाट नर्सरी स्थापना गरेका रोकामगरले विभिन्न प्रजातिका फूल बिक्री गर्दै आएका छन् । दैनिकजसो फूल खरिद गर्न स्थानीय तथा जिल्ला बाहिरबाटसमेत ग्राहक आउने गरेको उनको भनाइ छ । रु. एक लाखबाट सुरु गरेको फूलखेतीमा अहिले करिब रु. सात लाख लगानी रहेको उनले जानकारी दिए ।
सुरुआतमा स्थानीय जातको फूल रोपेर खेतीको थालनी गरेका रोकामगर अहिले विभिन्न जातका फूलखेती गरेका छन् । उनको फूलबारीमा तिहारका लागि सयपत्री फूलिसकेका छन् । तिहारका लागि सयपत्री फूलका माला बनाउन उनलाई भ्याइनभ्याइ छ । तिहारमा यो पटक करिब सात हजार माला बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला बाहिरबाट माग आएको भए पनि स्थानीय बजारमा खपत भइरहेको हुँदा जिल्लालाई प्राथमिकता दिएर फूल रोपेको बताउँदै उनले फूल व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्दै आएको छ भने । यसले आफू थप उत्साहित भएको रोकामगरको भनाइ छ । उनको फूलबारीमा सिजन अनुसार काम गर्ने मानिस थपेर राख्ने गरेपछि दैनिक रुपमा दुई जना कामदारले रोजगारी दिएको बताए । जिल्लामा फूललाई टिपेर लामो समयसम्म राख्न मिल्ने चिस्यान केन्द्र यहाँ नभएको उनको भनाइ छ । उनले भनु, “यहाँ फूलका लागि चिस्यान केन्द्र छैन, जसले गर्दा लामो समयसम्म फूललाई जोगाउन कठिन छ, फूलको स्टोर आवश्यक छ ।”
अहिले तुलसीपुर र घोराहीका अन्य स्थानमा पनि मौसमी रुपमा सयपत्रीको फूलखेती गरिएको छ । घोराहीका अन्य स्थानमा पनि व्यावसायिक फूलखेती गरिएको छ । तुलसीपुर– सुर्खेत सडकखण्डअन्तर्गत तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–८ दोघरेमा पनि सयपत्री फूलखेती गरिएको छ । स्थानीय पाँच जना युवा मिलेर संयुक्त लगानीमा फूलखेती गरिएको छ । करिब सात कठ्ठा क्षेत्रफलमा रोपिएको सयपत्री फूल अहिले फुलेर ढकमक्क बनेको फूलखेती गर्दै आउनुभएको झग्गु भण्डारीले बताए ।
उनका अुनसार पाँच युवा मिलेर जग्गा भाडामा लिएर बेलुवामा तीन महिना पहिले सयपत्री फूलखेती गरिएको छ । तिहारलाई लक्षित गरी फूलखेती गरेको बताए । दाङमा व्यावसायिक रुपमा फुलखेतीतर्फ युवाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । बाणगङ्गा नगरपालिका कपिलवस्तुका भास्कर पङ्गेनीले घोराही उपमहानगरपालिका–१५ भरतपुरमा व्यावसायिक सयपत्री फूलखेती गर्दै आएका छन् ।
कपिलवस्तुमा चार वर्षदेखि फूलखेती गरिरहेका पङ्गेनीले दाङमा १० कट्ठा जमिन मासिक दुई हजार भाडा दिने सर्तमा फूलखेती गरेका छन् । स्वदेशमै फूलमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले रु. पाँच लाख लगानी गरेर खेती सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।
अहिले विभिन्न स्थानबाट फूलको माग आएको हुँदा माला बनाउने काम पनि सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । करिब पाँच हजार माला बिक्री गर्ने लक्ष्यका साथ फूल रोपिएकोमा फूल निकै रामे्रासँग फुलेको पङ्गेनीको भनाइ छ । स्थानीय महिलालाई फूलका माला बुन्न उनले रोजगारीसमेत दिएका छन् । एउटा माला बुनेबापत रु. पाँच दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
फूल उत्पादनका लागि दाङको माटो उपयुक्त रहेको उनले बताए । यहाँ उत्पादन भएको फूल विदेशमा निर्यात गरेर पनि आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको कृषि विज्ञको भनाइ छ । जग्गा बाँझो छोडेर विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै बसेर यस्तै फूलखेती गर्न सके त्यसले आयआर्जनको बलियो आधार निर्माण हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।